Ubuntu — MYSTERY ZILLION
July 2008 edited August 2008 in Ubuntu
Ubuntu မှာအင်တာနက် ချိတ်ပုံချိတ်နည်းလေးပြောကြပါအုံးဗျာ.. အခုလုပ်နေတာလုပ်လို့မရလို့ပါ..
ကျွန်တော်က LAN ကိုမချိတ်တတ်တာပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင် အခုဖြေပေးကြပါဗျာ လုပ်ဖူးတဲ့သူများ ကျွန်တော်ထိုင်စောင့်မယ်ဗျာ အရမ်းသုံးချင်နေလို့ပါ...
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ Lan ကို ဒီအောက်ကအတိုင်း Root ထဲ၀င်ပြီး ter : မှာ command ရိုက်ပြီး ချိတ်ပါတယ် ....
ifconfig eth0 10.119.48.5 netmask 255.0.0.0 up
route add -net 0.0.0.0 gw 10.100.10.10
echo nameserver 10.100.1.1 > /etc/resolv.config
10.119.48.5 = Ip address
255.0.0.0 = Subnet mask
10.100.10.10 = Default gateway
10.100.1.1 = Preferred DNS server
Network Icon လေး အပေါ်ဘက် ညာဘက်ထောင့်မှာတွေ့လားမသိဘူး။
Click နှိပ်လိုက်ရင် Manual Configuration ဆိုတာပေါ်လာမယ်။ ထပ်နှိပ်လိုက်။ ပြီးရင် Unlock လုပ်။ Wired connection ကိုရွေး။ Properties button ကို နှိပ်။ Enable roaming mode check box ကို ဖြုတ်။ static ip ကိုရွေး။ အဲ့မှာ Ip ထည့်။ OK လုပ်ရင် ပြီးပါပြီဗျာ။
Panel ပေါ် ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးဆင့်ပုံလေး..LAN Icon ခေါ်မလားမသိဘူး။
အဲဒါကို Click ခေါက်ရင် Manual network configuration ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
(တနည်း= System - Administration - Network ကို နှိပ်ပါ)
Network setting Box ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီက Unlock ကို နှိပ်ပါတယ်။ Pwd တောင်းပါလိမ့်မယ်။
pwd ရိုက်ထဲ့ပါက မှိန်နေတဲ့ Wired connection & Point to Point connection လင်းလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီက Wired Connection ကို ရွေးပြီး Property ကို နှိပ်ရပါမယ်။ eth0 properties Box ပေါ်လာပါတယ်။
configuration = Static IP address
IP address = 10.0.0.91 (server IP Group ထဲမှ ဖြစ်ရပါမယ်)။
Gateway address = 10.0.0.1 (ကျနော်တို့ရဲ့ server Proxy ဖြစ်ပါတယ်)။
ပြီးရင် ok ကို click လုပ်။
Applications - Accessories - Teminal ကို ဖွင်ပါ။
ping 10.0.0.1 ကို ရိုက်ထဲ့ပါ။
Reply From 10.0.0.1 မှ ပြန်ကြားလာပါလိမ့်မယ်။ (ဒါဆိုရင် Network ချိတ်လို့ ရပါပြီ)။
Firefox Browser ကို ဖွင့်ကြည့်လျှင် proxy error ဖြစ်နေပါက။
system - preference - network proxy ကို ဖွင့်ပါ။
proxy configuration Tab မှ Manual proxy configuration ကို ရွေးပြီး
HTTP proxy တွင် 10.0.0.1 (မိမိ server proxy ဖြစ်သည်။)။ port =8080
ပြီးလျှင် ပိတ်လိုက်ပါက Firefox connection ရရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများသည် MZ user CodeName ၏ စိတ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ များဖြစ်သည်။
There are starting now. I 'll brainstorm to all of my bro bcoz I have installed Ubuntu just now. I'm using internet with Ubuntu. I have something to ask u, at first, Can we install .exe in Ubuntu? second, If we can install, is it the same with Window? bcoz I can't open .exe file. third, where can I get Zawgyi Software for Ubuntu? I can see Myanmar font but I can't type till now and fourth, Can we used antivirus software in Ubuntu ? That are the first I need for Ubuntu. After u answered, I will ask another question? Please reply ASAP. Thank. Please reply in Myanmar language. Thank
If you want to install .exe (means window programs), you have to use Wine.
second ,you dont need antivirus in linux, there are very little viruses in linux, that is why I use ubuntu.
But you can get antivirus like bitdefender to scan the window drive.
I am also the new user and I dont know much. :P
leonidas wrote: »
Google ထဲမှာဖတ်ရင်နဲ့ ကျနော်လဲတွေ့မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ wine ဆိုတာကို သူပြောတဲ့နေရာမှာ သွားရှာတာ ရွာလည်ပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ web ဆိုတော့ Virus ထိမှာကြောက်တာနဲ့ ပြန်ထွက်လာတာ။ ကျနော် Ubuntu ထဲမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ဗမာလို ရိုက်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိတဲ့သူတွေပြောပြပေးကြပါ။
ubuntuforums.org is reliable. I also dont know how to type.